Ny fampiharana 6 tsara indrindra hianarana Portiogey | Androidsis
Ny fampiharana 6 tsara indrindra hianarana Portiogey
Nerea Pereira | | Fampiharana Android
Tena ilaina ny fiteny raha afaka mivezivezy na aiza na aiza ary afaka mifandray tsy misy olana. Ny iray amin'ireo fiteny izay manintona ny saina indrindra dia portogey Ary raha liana te hianatra ilay fiteny ianao dia manana fampiharana marobe izay hanampy anao amin'ny fianaranao.
Na dia rehefa mianatra fiteny iray aza ny safidy tsara indrindra dia ny mankany amin'ny firenena nahalala ny fiteny haingana kokoa ary mampihatra izany amin'ireo olona ireo. Saingy fantatray fa safidy sarotra ho an'ny olona maro izany. Noho izany ny teknolojia dia mety ho mpiara-miasa akaiky aminao indrindra amin'ny fampiasana fampiharana hianarana Portiogey ary ataovy izany rehefa manam-potoana ianao nefa tsy mila mandoa na inona na inona. Ary anio dia asehonay anao ny sasany amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'izany.
1 Fampiharana tena ilaina hianarana Portiogey
Fampiharana tena ilaina hianarana Portiogey
Ireo no fampiharana tsara indrindra amin'ny fianarana Portiogey, ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy mitovy ary samy manana ny fianarany ary izy rehetra namboarina manokana araky ny mpampiasa tsirairay. Ary ny fananana fianarana amin'ny tsindry iray amin'ny findainao na ny takelakao dia safidy mety indrindra hampihatra na aiza na aiza amin'ny fotoana malalaka anananao, ary na inona na inona ifandraisanao Internet na tsia.
Noho izany, tsy mila adim-potoana intsony izahay, mamela anao amin'izay heverinay ho izy izahay fampiharana tsara indrindra hianarana portogey avy amin'ny finday misy valiny tsara indrindra.
Manomboka amin'ny iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra izahay izay hahafahanao mianatra Portiogey mora foana sy ny feno indrindra. Ny rafi-pampianarana ao Duolingo dia amin'ny alàlan'ny haavon'ny fandresena sy ny fahazoana vola madinika izay hanampy anao hamaha fanazaran-tena sy hetsika hafa. Azonao atao ny misafidy ny drafitra fandinihana tianao 5 na 20 minitra. Tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra izy io satria manampy anao hianatra ilay fiteny amin'ny alàlan'ny fahaiza-mihaino, resaka, famakiana, fampiharana fitsipi-pitenenana sy voambolana.
Ary mandinika ny fiteny maro be hita ao amin'ny Duolingo, Ny marina dia ity no iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hianarana fiteny, na Portiogey io na misy hafa hita ao amin'ity rindranasa matanjaka ity.
Duolingo - Mianara anglisy sy fiteny hafa maimaim-poana
Manohy ny Busuu rindranasa mitovy amin'i Duolingo fa misy fiasa tena mahaliana hahalalana haingana kokoa. Ny tanjona dia ny hanampy anao hahafantatra ireo foto-kevitra fototra, voambolana, andian-teny mahazatra indrindra ho an'ny resadresaka ary hahafantatra fitsipi-pitenenana.
Ny fomba fandalinany dia amin'ny alàlan'ny feo, fanatanjahan-tena, fanamby amin'ny tsipelina ary lalao hampiharana izay rehetra ianaranao avy amin'ny sokajy na amin'ny Internet na ivelan'ny Internet.. Azonao atao ihany koa ny mahita ny hahafantatra ny zavatra rehetra nianaranao tamin'ny resadresaka isan'andro tamin'ny mpandahateny tompon-tany mba hahalavorary ny fiteny sy ny lantom-peony.
Tsy isalasalana fa safidy hafa tena tsara hodinihina, indrindra noho ny mety hiasana ivelan'ny Internet, noho izany dia mety tsara ho azy mianatra Portiogey amin'ny findainao mandritra ny dia.
Busuu: Mianara anglisy
Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hianarana portogey ny HelloTalk. Ity fampiharana ity dia manome anao fotoana mety Miresaha amin'ireo teratany miteny Brezila sy Portugal mba hanampy anao hanatsara sy hanadio ny anao fitenenana. HelloTalk dia hamela anao hanao antso tsy misy vidiny ho an'ny tsirairay fa koa handrafetana feo sy horonan-tsary, handefa hafatra an-tsoratra sy feo na handika fehezanteny sy lahatsoratra hahalalana voambolana bebe kokoa amin'ilay fiteny.
Izy io dia tsy isalasalana fa fitaovana tena tsara izay hahafahanao mahafantatra fitenim-paritra sy fitenenana amin'ny fomba fitenenana mahazatra ny fiteny sy ny olona tena izy izay hanampy anao amin'ny traikefa amin'ilay fiteny.
HelloTalk - Mianara fiteny
Developer: HelloTalk Mianatra Teny Languages
Manohy amin'ny fampiharana tsara hafa hianarana Portiogey sy fiteny maro be izahay izay iray amin'ireo fiteny feno sy mora ampiasaina isan'andro isan'andro koa. Azonao atao ny mianatra fitsipiky ny voambolana sy fitsipi-pitenenana ary koa manatsara ny fanononana ny fiteny anao noho ireo teknika novolavolain'ny manam-pahaizana manokana momba ny fiteny.
Ataovy ao an-tsaina fa rindranasa maimaim-poana izay mamela anao hisintona ny lesona isaky ny taranja, fa raha te hiditra amin'ny katalaogin'ny ambaratonga feno ianao dia tsy maintsy mandoa famandrihana isam-bolana.Ity famandrihana ity dia hanome anao fidirana amin'ny fampianarana maherin'ny 5.000 ary manana fiteny mihoatra ny 14 hianaranao na aiza na aiza no tianao. Safidy tsara hianarana fiteny mora foana izany ary azonao omena torohevitra amin'ny namana na fianakaviana.
Aza manaiky ho voafitaky ny dokambarotra be loatra naloan'ny rindrambaiko hiseho amin'ny karazana haino aman-jery rehetra. Tena serivisy tena mandeha tokoa izy io ka mendrika ny andrana. Ary raha raisina ny naoty tsara azony tao amin'ny magazay fampiharana Google dia mazava fa io no iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hianarana Portiogey amin'ny findainao.
Babbel: Mianara Fiteny
Fampiharana iray hafa mitovy amin'ny an'ny teo aloha ihany koa ny Tandem, izay ahafahanao miresaka amin'ny tompon-tany ao amin'ilay firenena tianao hiresahana ny fiteninao sy hiresahana amin'ireo mpianatra hafa. Mila misoratra anarana amin'ilay rindranasa fotsiny ianao dia hiseho ny olona afaka manaraka sy izay te hianatra ny fiteninao koa mba hifanampiana hianatra ilay fiteny sy fahalalana momba azy.
Ny rindranasa dia manana rafitra manitsy ny hadisoana rehetra amin'ny fitsipi-pitenenana izay nanananao ary hianaranao ny antony tsy mety ary koa ny manampy eo mba hisy fifandraisana tsara eo amin'izy roa. Io dia ahafahanao manao antso an-tsary amin'ireo mpampiasa na miaraka amin'ilay kinova pro azonao ifampiresahana mivantana raha toa ka mieritreritra ny ho tonga any amin'ny firenena tsy ho ela ianao mba hanana torohevitra sy voambolana bebe kokoa amin'ilay fiteny.
Tandem: Mitenena amin'ny fiteny rehetra
Developer: Technology Technology Tripod
Memrise dia fampiharana feno fahalianana izay hanampy anao hitadidy ireo hevitra sy teny amin'ny alàlan'ny sary na horonan-tsary amin'ny lohahevitra manokana.
Araka ny azonao an-tsaina dia natao ho an'ireo te hianatra voambolana bebe kokoa momba ilay fiteny izy ireo satria efa manana ny fototra izy ireo. Ny tombony dia ireo mpandahateny miteny ny tena fiteny no nanao ny horonan-tsary mba hanamorana ny fianarana ilay fiteny.
Memrise: Mianara anglisy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana 6 tsara indrindra hianarana Portiogey
Tsy mandeha ny Smartflix: ny safidy tsara indrindra
Ahoana ny fametrahana am-pitokisana amin'ny Instagram sy fika hafa ilaina